Mowshin ka dhan ah maxkamadda sare Puntland oo lasoo jeediyay (akhriso) – Radio Daljir
Mowshin ka dhan ah maxkamadda sare Puntland oo lasoo jeediyay (akhriso)
Luulyo 20, 2019 1:39 g 0
Xildhibaano ka mid ah golaha wakiilada Puntland ayaa kasoo saaray magaalada Garoowe ee caasumadda Puntland mowshin ka dhan ah maxkamadda sare Puntland oo ka kooban sagaal xubnood, kuwaasi oo lagu soo eedeeyey xil gudasho la’aan, caddaalad darro iyo musuqmaasuq.
Xildhibanada mowshinka ku saxiixan ayaa dalbaday isbadal degdeg ah oo guddiga lagu sameeyo.
Maxkamadda sare Puntland ayaa ka kooban sagaal xubnood oo shan ka mid lagu soo saaro wareegto madaxwayne, halka afarta xubnood ee kalle laba ka mid ah ay ka yimaadaan bulshada iyo laba ka yimaada xildhibaanada Puntland.
Kufsiyo kadhacay deegaamada Puntland ayaa dadka ugu badan ay walaac ka muujinayeen garsoorka Puntland inuu gabay shaqadiisii.
Hoos ka akhriso mowshinka.
Daljir & BBCMA: Baraarugga Haweenka – Taxanaha 17aad (Xaawo Axmed iyo Maxamed Xasan Dhalo – dhegayso|daawo)
Diwaangalinta Mushariixinta Jubbaland oo kismaayo ka bilaabatay (Daawo)